Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in uusan wax fara gelin siyaasadeed ku haynin arrimaha Soomaaliya - iftineducation.com
Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in uusan wax fara gelin siyaasadeed ku haynin arrimaha Soomaaliya
iftineducation.com – Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in uusan wax fara gelin siyaasadeed ku haynin arrimaha Soomaaliya isla markaana ku baaqay in la ixtiraamo madaxbanaanida Soomaaliya.
Kaaliyaha Xogheyaha Wasaaradda arrimaha dibadda ee arrimaha Dhaqaalaha iyo iskaashiga dhaqanka Dr Yusuf Bin Trad al-Sacdoon oo kamid ah ergadii ka qaybgashay shirkii ka dhacay Copenhagen ayaa ka dhawaajiyey muhiimada ay leedahay in la ixtiraamo midnimada, qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya.
Wuxuu ugu baaqay dhinacyada kala duwan ee Soomaalida iyagoo kaashanaaya beesha caalamka in ay u midoobaan sidii loo heli lahaa nabadgalyo iyo xasilooni.
Dhinaca kale masuulkan ayaa sheegay in Sacuudiga uu safka kaga jiro wadamada Soomaaliya iminka ka taageeraya dhinaca horumarinta isagoo tibaaxay in mashaaric kala duwan oo isugu jira caafimaad, waxbarasho iyo biyaha ka sameeyeen dalka.
Hadalkan ayaa imaanaya xilli wadamada Khaliijka sanadihi u dambeeyay tartan ugu jireen arrimaha Soomaaliya.
Khilaafka Madaxda Dowladda oo laga cabsi qabo in uu Saameeyo Safaaraadaha Soomaaliya
Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyada weerarkii lagu laayey dadkii saarna Buska dalka Kenya